#RaiseYourVoice! Asandrato ny feonao! Asa fanandevozana eto Madagasikara
2015-10-15 @ 23:23 in Andavanandro
Ny andron'ny 16 oktobra indray no "Andro Ikatrohan'ny Blaogy" na antsoina hoe "Blog Action Day" #BAD2015 araka ny ahafantaran'ny maro azy eo amin'ny sehatra iraisampirenena. Raha nangina am-bolana vitsy ny blaogiko teto dia fotoana izao ihetsehany indray ka amoahany izay hevitra mpanohariana ato amiko ato.
Ny ankamaroan'ny olona eto Madagasikara raha mitaraina dia toa mivantana any amin'ny fitondram-panjakana avy hatrany ny fitarainana rehetra ary toa tsy dia manaraka an-tanantohatra ilay izy fa avy hatrany dia any am-bovonana araka ny fiteny. Rehefa jerena anefa dia ireo ao antenantenany no tena mihoa-pahefana na manao ny tsy mety sy ireo izay mihevi-tena fa manana mpitondra ambony hiaro azy na dia tsy ao anatin'ny an-tanantohatry ny fitantanan-draharaha aza.
Izaho kosa rehefa nandia izay fotoana lava niainana izay, dia mahatsapa fa na dia manana ny andraikiny tokoa aza ny mpitondra fanjakana dia ireo rafitra tsy miankina toy ny eny an-tsekoly na ny eny amin'ny birao na ozinina na eny amin'ny tsena (fifanakalozana ara-barotra) ihany no tarafin'ny mpitondra fanjakana. Izay tsy rariny rehetra heverintsika fa itarainantsika amin'ny mpitondra fanjakana dia tsy rariny ataon'ireo ambaratonga tanisaintsika ireo, saingy sarotra ny itsikerana azy sady mety hahavoaroaka ihany koa nefa mety hihatra amin'ny ain-dehibe raha voaroaka avy any amin'ireny sehatra ireny ka aleo mipirimpirina. Noho ny tsy fihetsehan'ny fitondram-panjakana hiaro ny olom-pirenena ao aminy dia lasa manjakazaka manao izay danin'ny kibony ireny sehatra tsy azo tsikeraina ireny, ary rehefa manao ny tsy rariny ireny sehatra ireny dia ny mpitondra fanjakana ihany no mahazo tsiny ho mpiray tsikombakomba amin'ny fanaovana ny tsy rariny amin'ireo mpiasa... aza mba mpiasa aman'olona ihany...
Satria manko tsy manambola ny fanjakana ary mitady fatratra izay fomba hahazoan'ny olona asa sady tsy manelingelina ny seza fiandrianany dia avela gaboraraka ny lalàna fiahiana mahaolona ireo olona fehezin'ny mihevi-tena ho tompon'ny lalàna rehefa tsy mampihatra ny lalàna tokony ampiharina amin'ireny sokajin'olona iondrehan'ny mpiasa ireny ny mpitondra fanjakana. Ny loza aza dia misy ireo heverina ho solontenam-panjakana hanelanelana eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa rehefa amin'ny vanim-potoana manahirana no izy indray no misolovava ny mpampiasa. Efa niaina izany manokana ny tena, hoy ilay "Inspecteur d'Etat" tao Antsahavola izay rehefa nametraka ny fitarainako tamin'ny asa tamin'ny maha-delege aho hoe: "Tsy hitako izay itarainanao amin'izany fa be dia be ireo ny olona mitsiriritra ny asanareo fa mahaiza mipetraka, rehefa tsy zaka dia mialà fa aza be taraina" (Tamin'ny andron-dRatsiraka nitondra fanindroany izany fotoana izany!) Tena tezitra aoka izany aho tamin'izany valin-teny izany fa fitarainan'ny mpiasa no entiko ary misahana ny asa ny raharahany ka tsy mahagaga raha be no mihevitra hoe efa nosisihan'ny mpampiasa vola ireny "Inspecteur d'Etat" ireny matoa mahavita miteny toy izany ka tsy mahagaga ny mpiasa raha lasa manaonao foana rehefa tsy hita izay heveriny hiahy azy rehefa tsy misy miraharaha izy nefa mahatsapa ho ianjadian'ny tsindrihazolena.
Noho ny toe-javatra tahaka izany indrindra no nahatonga ahy namoaka tao amin'ny facebook (ary efa mivoaka ihany koa ato amin'ny blaogy.com) hoe Tiavo ny asanao fa aza mitia ny orinasanao. Io orinasa io tsy hiraharaha izay momba anao raha azony atao ihany koa fa ny tombontsoany ihany ny azy no fantany. Io orinasa io tsy maika amin'ny resaka sosialy hitsinjovana ny mpiasa fa mahavita manapa-kevitra haingana dia haingana rehefa hitany fa misy tataka ny fitoeram-bolany. Fa dia inona loatra ary no anandratana feo amin'izao fotoana izao? Nisy mpamaky ahy taloha nahatsikaritra fa rehefa hilaza zavatra iray atao lohateny aho dia mbola ilaozako miresaka zavatra hafa aloha vao mitodika any amin'ilay lohahevitra rehefa any amin'ny farany. Mbola manaraka izany firafitra izany angamba ity firafitra ity raha mbola mamaky ity tsanganana ity indray izy. Izay no ela fa horesahintsika amin'izay ny olana tsy sahin'ny mpiasa aboraka ampahibemaso fandrao mahavoaroaka araka ny fiheverany.
Efa nipetraka hatramin'ny repoblika faharoa ny fe-potoam-piasan'ny mpiasa isan-kerinandro ho 40 ora fa heverin'ireo vahiny "mpampiasa vola" eto amintsika fa ny mpiasam-panjakana irery ihany no misitraka izany zon'ny mpiasa izany fa izy ireo kosa mampiasa anao amin'izay ora tiany na ho 60 ora na ho 70 ora isan-kerinandro aza izany (izaho aza efa nisy fotoana niasa 76 ora isan-kerinandro ary mbola betsaka no manana ora mihoatra noho izany niainako izany). Raha miresaka izany ianao ny ao an-tsain'ny olona voalohany dia hoe saosy be izany asa mafy ataonao izany, fa heveriny ho mandainga ianao raha mamaly azy fa tsy misy tambin-karama azo avy amin'izany ora be dia be mihoatra izany na dia ariary aza satria efa "cadre" na mpifehy ianao dia tsy voafetran'ny ora intsony ny asanao fa izay amitanao ny iraka ampanaoviny anao no ataonao. Raha asam-pitiavana manokana sy fanolorantena ilay izy dia tsy hitako izay itarainana, ary toy izany ihany koa raha mba mifanaraka amin'izany ny karama, saingy karama herinandro dia vita tanteraka! Tsy mahagaga raha misy ireo mitady vady an-tserasera na an-gazety ireo no mitady "cadre superieur" fa tsy "cadre" (fametrahan-tsary) satria iharan'ny fanandevozana ankolaka amin'ny karama kely, ary mety mbola kely vola raisina noho ny "employé" ao amin'io orinasa iray io ihany aza izany "cadre" tsotra izany. Ho anareo izay mbola hiasa, tandremo tratran'ny fandrika toy io nosoratako io. Sarotra ho anay mpiasa ny hitaraina amin'ny mpitondra fanjakana rehefa hitanay miharihary fa hay mpiara-komana amin'ny mpitondra orinasa mety ho manao tsinontsinona ny mpiasa ao aminy ianareo rehefa hitany fa mpiray fikambanana any amin'ny "fikambanana mpanao asasoa" na fikambanan'ny mpanankarena any ianareo, saingy mbola alefa ihany ny fitarainana mba ijerena lalàna iarovana ny mpiasa amin'io fitaka ataon'ny mpampiasa ao amin'ny fifanarahan'asa io.
Faramparany dia misy ihany koa ireo tsy manaja ny andro fiasana sy ny andro tokony hialan-tsasatra ary misy ireo mpitantana orinasa (misy hoy aho fa tsy izy rehetra) no izy indray no tezitra rehefa lazaina aminy fa tsy azo atao ny miasa 26 jona ohatra eto Madagasikara... satria malalaka loatra amin'izay ataony izy fa tsy raharahiany mihitsy ny hiasan'ilay mpiasa "tsy mahazo tambin-karama" noho ny fiasana andro fety na alahady noho ilay fifanarahan'asa izay voalazako etsy ambony etsy ihany. Efa tsy fantany intsony fa efa voasoratra ao amin'ny lalàna ny mba hananan'ny mpiasa fialan-tsasatra 48 ora ao anatin'ny herinandro. Noho ny tsi-fieritreretana fa misy ireo mpiasa miasa alahady mba mangataka andro hafa ho solon'ny alahady niasana (izany hoe 24 ora isan-kerinandro no tadiavina) no mbola mahazo valinteny fa tsy zon'ny mpiasa izany fa fitiavana manokana avy amin'ny orinasa ("faveur") raha omena "day off" izy, ilay fitenenana "day off" manko no mamitaka fa solon'alahady no tena izy.
Farany, satria manko tsy manankaleha intsony ireo mpiasa, indrindra rehefa mahazoazo taona izy, no anaovana toeran-tsy zaka ka tsy raharahiana na 10 na 15 na 20 taona niasana izy fa raha vao manao fahadisoana indray mandeha, toy ny fahatarana ohatra, dia sady omena sazy no iniana afindra toerana hafa izay efa miharihary fa tsy ho tian'ilay mpiasa ka rehefa tsy manaiky dia terena hametraka fialana, dia maro ireo manampim-bava ny tenany fandrao tsy homam-bary ny vady aman-janaka. Tsy manan-kitarainana intsony no sady tsy maharo azy izay rafitra rehefa natao hiahy azy ny mpiasa. Satria manko be loatra ny tsy an'asa ary be ny mpitady asa araka izany, dia anaovana izany karazam-panandevozana izany nefa ny karama omena amin'io ilay karama sahaza ny mbola ipetrahan'ilay mpiasa any amin'ny tranon-dray aman-dreniny ihany.
Hafatra ho anareo tanora: Aza mba mpiasa ihany fa raha azonao atao dia mitadiava fihariana tsy eo ambany fahefan'olon-kafa, sarotra izany fa aleo miasa mafy ahitam-bokany toy izay ampiasaina mafy amin'ny karama tsy mahavita tapabolana... Raha mbola tanora ianareo dia matanjaka tsara na saina na hery fa rehefa mihalehibe ianareo dia mihaosa avokoa na ny saina na ny hery.
Zoma 16 oktobra 2015 amin'ny iray ora sy sasany maraina...